Mazda Car Check Myanmar
Event or Special Offer Period: 02 - 13 Dec 2019
ပျော်ရွှင်စရာ ခရီးသွားရာသီရောက်နေပြီဆိုတော့ မိသားစုနှင့် အပန်းဖြေခရီးထွက်ဖို့ စီစဉ်နေပြီလား။ ခရီးတိုပဲသွားသွား၊ ခရီးရှည်ပဲသွားသွား Safety First က အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်လို့ မသွားခင် သင်တို့ရဲ့ Mazda ကားတွေကို Mazda Service Center တွေမှာ စစ်ဆေးသွားဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်။ ယခုလို လာရောက်စစ်ဆေးမယ့် Mazda ချစ်သူတို့အတွက် အထူးသတင်းကောင်းကတော့ ဒီဇင်ဘာ (၂) ရက်နေ့မှ (၁၃) ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေးမြို့ရှိ Showroom များတွင် Mazda ကား အားလုံးအတွက် Free Health Check အစီအစဉ် ရရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒါတင်မက Spare Parts ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရင်လည်း 10% Off Discount ရရှိသွားဦးမှာပါ။ ကဲ ခရီးမသွားခင် ပရိုမိုးရှင်းအမှီလေး Mazda Showroom တွေမှာ Free Health Check လုပ်ရအောင်ဗျို့။ Mazda နှင့်ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို
Sale Hotlines Yangon: 09 897 837 897 - 01 967 02 86 Mandalay: 09 456 1111 04 - 09 456 1111 05
Service Hotlines Yangon: 01 967 0285 - 09 250 830 009 Mandalay: 09 977 388 829 - 09 456 111 104 တွင်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Mazda မော်တော်ယာဉ်များကို စမ်းသပ်မောင်းနှင်လိုသူများနှင့် service appointment ပြုလုပ်လိုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါ Link တွေကနေတဆင့် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
Book A Test Drive: https://bit.ly/2KDpq6l
Book Service Appointment: https://bit.ly/2ZT3KXr
Are you planningavacation with family . Remember to check out your mazda car at Mazda service center before you travel safety first is most important Great news for all mazda lovers out there will beafree health check for all mazda cars at showrooms in Yangon and Mandalay from 2th to 13th December. You'll still receivea10 % off discount if you buy spare parts items. Let's get free health check at the mazda showrooms for free health check in mazda showrooms.
Details on mazda Sale Hotlines Yangon: 09 897 837 897 - 01 967 02 86 Mandalay: 09 456 1111 04 - 09 456 1111 05
Service Hotline Yangon: 01 967 0285 - 09 250 830 009 Mandalay: 09 977 388 829 104-09 456 111 for inquiries.
Mazda vehicles for test drivers and service appointment can register via the links below.